February 2017 | အလင်းမျက်ဝန်း ®
အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးစွဲဖို့ အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အတိုင်ပင်ခံ သတိပေး
28.2.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်လုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံ Mc Master က အစ္စလာမ်အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးစွဲနေခြင်းကို ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အပါအဝင် သူ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံတွေဘက်က အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို အစ္စလာမ်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြောဆိုနေခြင်းဟာ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေသာဖြစ်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
အသက် (၅၅) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Mc Master က တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုမှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးစွဲနေခြင်းဟာ မှားယွင်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေဟာ အစ္စလာမ်နဲ့ ဘာမှကို မသက်ဆိုင်လို့ပါပဲ။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ တချို့မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ တကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင် အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမတွေကနေ သွေဖည်တိမ်းရှော်ပြီး ဘေးရောက်နေကြသူတွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာလွန်းပါတယ်။ ”
ပြီးခဲ့တဲ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးစဉ်အခါက ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ ဟီလာရီကလင်တန်ကိုလည်း အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးလို့ ပြစ်တင်ဝေဖန် ထိုးနှက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Mc Master ဟာ အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ တပ်ကြပ်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ် ဒုတိယမြောက် ကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံများစစ်ပွဲ၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အီရက်စစ်ပွဲ၊ အာဖဂန်စစ်ပွဲတွေမှာ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားလာသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-039/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
28.2.17 Myanmar , Video , ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဗလီ , ပြည်တွင်း , ရန်ကုန် , အထူးအစီအစဉ် , အားကစား
မွတ်စ်လင်မ့်ရင်သွေးများအား အစ္စလာမ့်ရှုထောင့်အရ နွေကျောင်းပိတ်ရက်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းစေမှာလဲ?
“ အစ္စလာမ်နှင့်အားကစား ”
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/0Rq7rS8Lh_8[/info]
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကို စိတ်ချမ်းသာမှု အပေးနိုင်ဆုံးသော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဘာရိန်းအစ္စလာမ့်နိုင်ငံက ရပ်တည်နေ
25.2.17 Bahrain , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေနဲ့ အခြေချနေထိုင်သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာမှုအပေးနိုင်ဆုံးသော နိုင်ငံများစာရင်းမှာ ဘာရိန်နိုင်ငံလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ဘာရိန်နိုင်ငံဟာ ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရဗ်အစ္စလာမ့်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် HSBC ဘဏ်က ကောက်ယူခဲ့တဲ့ သုတေသနစစ်တမ်းမှာ ဘာရိန်း၊ ဆွီဒင်နဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့ကို နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ဘဝရှင်သန်ဖို့နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ မျှတမှုအရှိဆုံးသောနိုင်ငံတွေအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ စစ်တမ်းမှာ အခုလို ဆိုထားပါတယ်။
“ ဘာရိန်းနိုင်ငံနဲ့ အခြားငါးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆွီဒင်၊ ရရှား၊ စပိန်၊ နယူးဇီလန်နဲ့ မက္ကစီကိုနိုင်ငံတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် စိတ်ချမ်းသာမှု အပေးနိုင်ဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ”
အဆိုပါ စစ်တမ်းကို ခေါင်းစဉ်လေးခု သတ်မှတ်ပြီး စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ခေါင်းစဉ်လေးခုကတော့ -
ကဗျာဆန်တဲ့ လူနေမှုဘဝ နဲ့
အကောင်းဆုံး အလုပ်အကိုင် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ စစ်တမ်းဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ရှိနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားပေါင်း (၂၁၉၅၀) ကို စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Inews-038/2/2017 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » الأيام
ကလေးငယ်များကို နွေရာသီအားကစားသင်တန်းများတွင် အခမဲ့အပ်နှံပေးမည်
24.2.17 Myanmar , ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဗလီ , ပြည်တွင်း , ရန်ကုန် , သတင်း
အစ္စလာမ်သာသနာဟာ လူသာမျိုးနွယ်ရဲ့ ကဏ္ဍအသီးသီး၊ အရေးကိစ္စအဝဝတို့မှာ အစဉ်အမြဲ ဂရုမူ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လေ့ရှိတဲ့အလျောက် အားကစားကိစ္စကိုလည်း ချန်လှပ်မထားခဲ့ဘဲ လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာကို ဆောင်ကြဉ်းယူဆောင်လာတော်မူတဲ့ ချစ်နဗီ မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး မုဟမ္မဒ် (ﺻﻠﯽ الله ﺗﻌﺎﻟﯽٰ ﻋﻠﯿﮧ ﻭﺍٓﻟﮧ ﻭﺳﻠﻢ) က မွတ်စ်လင်မ်တွေကို အားကစားလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တော်မူပါတယ်။
တချို့အားကစားတွေကို ကိုယ်တော်မြတ် ﷺ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်ဟာ အပြေးအားကစားကို လုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ မိခင်မွန်အာအိရှဟ်သခင်မကြီးနဲ့အတူ အပြေးပြိုင်တော်မူခဲ့ကြောင်း သြဝါဒတော်တွေမှာ လာရှိထားပါတယ်။
ကိုယ်တော်မြတ် တိုက်တွန်းအားပေးတဲ့ အားကစားတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
ယခုအခါမှာ နွေရာသီရောက်တော့မှာ ဖြစ်လို့ မိမိတို့ရဲ့ ရင်သွေးငယ်ကလေးတွေကို နွေရာသီအားကစား သင်တန်းတစ်ခုခုမှာ ထားချင်တဲ့ မိဘတွေအတွက် ဘယ်လိုအားကစားမျိုးတွေကို ရွေးချယ်မလဲ၊ အစ္စလာမ်က ဘယ်လိုအားကစားမျိုးတွေကို ခွင့်ပြုသလဲ စတာတွေကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဗလီရဲ့ သောကြာနေ့တရားဟောအစီအစဉ်မှာ ဆရာတစ်ပါးက လမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ အားကစားအကြောင်း ဟောကြားရာမှာ အဆိုပါဆရာအနေနဲ့ -
ကလေးငယ်တွေကို အပြေးအားကစား၊ ခုန်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း၊ နဘမ်းလှဲခြင်းအားကစား၊ လေးပစ်/မြှားပစ်အားကစား၊ အလေးမခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခြင်း၊ ဘောလီဘောကစားခြင်း၊ ဘတ်စ်ကဒ်ဘောကစားခြင်း၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းကစားခြင်း၊ တင်းနစ်၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ကရာတေး၊ ဂျူဒို၊ ဂျွမ်းဘား၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ သိုင်းပြောင်းပြန်၊ ရိုးရာသိုင်း၊ လက်ဝှေ့ စသဖြင့် အားကစားတွေကို သင်ယူဖို့ အစ္စလာမ်က ခွင့်ပြုထားကြောင်း ဟောကြားသွားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဆရာက နွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မိဘတွေက ကလေးတွေနဲ့အတူ အချိန်ပေးဖို့၊ တစ်နှစ်လုံး စာသင်ယူခြင်းမှာ ပင်ပန်းခဲ့ရရှာတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ်ပါအတူ ပါဝင်ဆော့ကစားဖို့နဲ့ သဲမြေတွေကို ဆော့ကစားအပန်းဖြေနိုင်ဖို့ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်စတဲ့ နေရာတွေကို ခေါ်ဆောင်သွားပေးဖို့ကိုလည်း ဟောကြားသွားပါတယ်။
ထိုသို့ ဟောကြားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဗလီဂေါပကအဖွဲ့က နွေရာသီကာလမှာ အားကစားသင်တန်း၊ ပညာရေးသင်တန်းအသီးသီးမှာ တက်ရောက်ချင်တဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေကို တာဝန်ခံထံမှာ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းနဲ့ အဆိုပါ ကလေးတွေရဲ့ ကာယ၊ ဉာဏတိုးတက်ရေးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီအကျိုးပြုရင်း သူတို့လေးတွေတက်ရောက်ချင်တဲ့ သင်တန်းတွေမှာ လိုက်လံ အပ်နှံပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသွားပါတယ်။
Mnews-01/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခေါင်းပေါ်ပုဝါခြုံမိလို့ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံခံရ
24.2.17 Hollywood , Lindsay Lohan , United Kingdom , သတင်း , အနုပညာ , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်တစ်ယောက် လန်ဒန်မြို့တော်ရဲ့ ဟီသရူးလေဆိပ်မှာ လူမျိုးရေး ခွဲခြားဆက်ဆံတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
သူမကို ပုဝါဆောင်းထားလို့ဆိုပြီး လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆောင်းထားတဲ့ပုဝါကို အဓမ္မချွတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
လိုဟန်ဟာ ITV သတင်းဌာနရဲ့ မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တင်ဆက်ဖို့အတွက် လန်ဒန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဟီးသရူးလေဆိပ်မှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူမ လေယာဉ်ပေါ် မတက်ခင် ခေါင်းပေါ်က ဆောင်းထားတဲ့ ပုဝါကို ချွတ်ဖို့စေခိုင်းခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ သူမဘဝမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု ဖြစ်တယ်လို့ လင်ဆေးလိုဟန်က ပြောပါတယ်။
“ လုံခြုံရေးတာဝန်ကျအမျိုးသမီးက ကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်းပုဝါကို ချွတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျမကလည်း ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုဝါချွတ်ပေးရတာက ကျမအတွက် ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျမစိုးရိမ်မိတာက ကျမနေရာမှာ ပုဝါချွတ်ရတာကို မကြိုက်တဲ့ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလုံခြုံရေးမက ကျမရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ကြည့်ပြီးမှ ကျမရဲ့နာမည်ကို တွေ့သွားလို့ ကျမကို ပြန်ပြီးတော့ တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ” လင်ဆေးလိုဟန်က ပြောပြသွားပါတယ်။
မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦးအဖြစ် ခံယူလိုက်ပြီလား၊ မခံယူရသေးဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လင်ဆေးဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ မပြောချင်သေးဘူးလို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကျော်မင်းသမီး လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလက တူရ်ကီသမ္မတ အာဒိုဂန်ကို “ ကမ္ဘာကြီးဟာငါးနိုင်ငံတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ” လို့ ရေးထိုးထားတဲ့ လည်ဆွဲတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီစာသားရဲ့အလိုသဘောကတော့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရလဒ်ဟာ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ဗီတိုငါးနိုင်ငံရဲ့ ခြယ်လှယ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိမနေသင့်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တူရ်ကီသမ္မတကြီး အာဒိုဂန်ဟာ နေရာတိုင်းမှာ ဒီစကားကို ပြောဆိုလေ့ရှိပြီး ကုလနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကို ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလို့ ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
လင်ဆေးလိုဟန်ဟာ မကြာခဏ ပုဝါဆောင်းပြီး ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိခြင်း၊ Instagram မှာ သူမရဲ့ အကောင့်ပေါ်က ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပြီး “ အလိုက်ကွမ်မွတ်စ်လင်မ် ” လို့ ရေးသားပြခဲ့ခြင်းနဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်စာအုပ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် လူတွေက သူမဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်ခံလိုက်ပြီလို့ ထင်ကြေးပေးခြင်း ခံနေရပါတယ်။
Inews-037/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
ဘိုးအင်း ၇၇၇ လေယာဉ်ပျံကို ပထမဦးဆုံးမောင်းနှံသူ အီဂျစ်အမျိုးသမီး
23.2.17 Egypt , ပျိုမေမွတ်စ်လင်မ် , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
နာရီပေါင်း (၃၄၀၀) ကျော် ပျံသန်းပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသော အီဂျစ်နိုင်ငံသူ မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီး လေယာဉ်မှူး
အီဂျစ်နိုင်ငံသူ မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာဂျိဒဟ်မာလစ်က်ဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးသော ဧရာမလေယာဉ်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ဘိုးအင်း ၇၇၇-၃၀၀ လေယာဉ်ကြီးကို ပထမဦးဆုံးမောင်းနှင်းပြီး အမေရိကနဲ့ ဥရောပအထိ ရောက်အောင် ဝေးလံတဲ့ခရီးတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အောင်မြင်စွာနဲ့ ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူမဟာ နာရီပေါင်း (၃၄၀၀) ကျော်လောက် ပျံသန်းပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်ကို ချိုးပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစံချိန်ကို သူမ မတိုင်ခင်က အမျိုးသားလေယာဉ်မှူးနှစ်ဦးသာ ချိုးနိုင်ခဲ့သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးလေယာဉ်မှုး မာဂျိဒဟ်မာလစ်က်ဟာ ငယ်စဉ်ဘဝကတည်းက ဒီလို ဝေဟင်ပေါ်က ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကို ဝါသနာထုံခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ဖခင် မာလစ်က်အဒလီဟာ ယခင် အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ လေယဉ်မှုးအကြီးအကဲတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဖခင်ရဲ့အရှိန်အဝါကို အသုံးချမှီခိုတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးတာနဲ့ သူမဟာ လေကြောင်းသိပ္ပံမှာ တက်ရောက်ဆည်းပူးခဲ့ပြီး ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်ရောက် လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ လေကြာင်းကုမ္ပဏီမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အီဂျစ်လေကြောင်းလိုင်းမှာ လေယာဉ်မှူးနှစ်ဦး ခေါ်ယူတဲ့အခါ ဝင်ခွင့်ကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပေမယ့် သူမဟာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပေမယ့် ကံကောင်းချင်တော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာပဲ နောက်ထပ် လေယဉ်မှူးနှစ်ဦးကို ထပ်မံခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့် ထပ်မံဝင်ရောက်ဖြေဆိုပြီး သူမ စာမေးပွဲ အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ထူးခြားစွာပဲ သူမကို လေယာဉ်မှူးဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ သမီးမှန်း ဘယ်သူကမှ မရိပ်မိခဲ့ကြပါဘူး။ သူမရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် လေကြောင်းလိုင်းမှာ ရာထူးတစ်ခုပြီးတစ်ခု တိုးတက်အောင်မြင်လာခဲ့ရာမှ လက်ရှိရာထူးအထိကို အမှီအခိုကင်းစွာနဲ့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
သူမ အလုပ်ရာထူးရပြီး (၃) နှစ်ကြာပြီးနောက်မှသာ သူမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့ဟာ သူမကို လေယဉ်မှူးအကြီးအကဲဟောင်းရဲ့ သမီးမှန်း သိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ အီဂျစ်နိုင်ငံကနေ ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံထိ ခက်ခဲရှည်လျားတဲ့ ခရီးစဉ်တွေကို ပျံသန်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဘယ်ခရီးမျိုးအတွက်မဆို သူမ အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။
သူမဟာ ခရီးသည် (၃၅၅) ဦး တင်ဆောင်ထားတဲ့ လေယဉ်ပျံကြီးကို ဝေဟင်ပေါ်မှာ (၅၅) နာရီလောက် ကြာမြင့်အောင် မောင်းရတဲ့ခရီးစဉ်မျိုးကို တစ်လမှာ သုံးကြိမ် ဦးဆောင်ပြီး မောင်းနှင်နေရပါတယ်။
ဒီတာဝန်ဟာ အလွန်မှ ခက်ခဲပြီး အမြဲတမ်း လန်းဆန်းတက်ကြွကာ သတိဝီရိယရှိနေဖို့လည်း အလွန်လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အဟ်မဒ်ကာမိလ်က အပြည့်အဝ အားပေးကူညီနေပါတယ်။
သူမရဲ့ခင်ပွန်းက သူမ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်သမျှကို စီမံပေးပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ပဲ သူမဟာ အိမ်မှာလည်း ဇနီးကောင်းတစ်ဦးရဲ့တာဝန်ကို ကျေပွန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း လေယဉ်မှုးတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်နိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
MML-02/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ ကျူးဘားရဲ့မြို့တော်မှာ ပထမဆုံးသော ဗလီ ဆောက်လုပ်မည်
22.2.17 Cuba , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းမှု အရှိန်အဟုန်ကောင်းလာတဲ့ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ ကျူးဘားရဲ့ မြို့တော်မှာ ပထမဦးဆုံးသော ဗလီဆောက်လုပ်မည်
ကမ္ဘာကျော် လက်တင်အမေရိက ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ကျူးဘားမှာ အစ္စလာမ်သာသနာတော်အား ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအရှိန်အဟုန်မှာ တစ်ဟုန်ထိုးဖြင့် ပျံ့နှံ့လာနေပါတယ်။
ကျူးဘားနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ တိုးပွါးလာတဲ့ အရေအတွက်ကို ထောက်ရှုပြီး မြို့တော်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို နိုင်ငံ့ပြယုဂ်အဖြစ် ဆောက်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်း မီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ကျူးဘားရဲ့ ကွန်မြူနစ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော် ဟာဗါနာမှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်ဆောင်ကို ဆောက်လုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံက ထည့်ဝင်လှူဒါန်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဟာ ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျူးဘားနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ (၁၁.၄) သန်းလောက်ရှိပြီး မွတ်စ်လင်မ်ဦးရေဟာ (၁၀၀၀၀) ဝန်းကျင်လောက် ရှိနေပါတယ်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်ကြီးများမှ စနဒ် (ဘွဲ့) ရရှိခဲ့တဲ့ သာသနာ့ပညာရှင်များရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် ကျူးဘားနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်သာသနာတော်ဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်ပြန့်ပွားလာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်ဒဏ်သင့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းက ကျူးဘားနိုင်ငံကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ မိမိတို့မြတ်နိုးတဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာတော်အကြောင်းကို ဒေသခံများအား ချပြပြီး ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာကို လက်ခံယုံကြည်သူတွေဟာ တစ်နေ့တခြား တိုးပွားလာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-035/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကမ္ဘာ့လက်နက်ပြန့်ပွားမှုရဲ့ (၅၆) ရာခိုင်းနှုန်းဟာ အမေရိကန်နဲ့ ရရှားတို့ထံမှဖြစ်
21.2.17 Russia , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာ ပြန့်ပွားလျက်ရှိနေတဲ့ လက်နက်တွေရဲ့ ထက်ဝက်ကျော်ကို အမေရိကန်နဲ့ ရရှားနှစ်နိုင်ငံက ဖြန့်ချိလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာသုတေသနအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ သတင်းအချက်အလက်မှာ အခုလို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့(၅)နှစ်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးမှာ ပြန့်ပွားနေတဲ့ လက်နက်အရေအတွက်ရဲ့ (၅၆)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမေရိကန်နဲ့ ရရှားနိုင်ငံတွေဆီက ဖြစ်ပါတယ်။
လက်နက်အများဆုံး ဖြန့်ချိတဲ့ နိုင်ငံစာရင်းရဲ့ တတိယနေရာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ လက်နက်တင်ပို့တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း(၁၀၀)ရဲ့ စာရင်းကို ပြုစုခဲ့ပါတယ်။
ယင်းနိုင်ငံပေါင်း(၁၀၀)က တင်ပို့တဲ့ လက်နက်တွေထဲမှာ (၃၃)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အမေရိကန်ရဲ့လက်နက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှားနိုင်ငံက သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကို လက်နက် (၂၃) ရာခိုင်နှုန်းလောက် တင်ပို့နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံကတော့ (၆.၂) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ လက်နက်တွေ တင်ပို့နေပါတယ်။
Inews-033/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်နှင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များတွင် လွှမ်းမိုးနေရာယူလာသည့် အရဗီဘာသာစကား
20.2.17 United States of America , သတင်း , ဆောင်းပါး , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အရဗ်မွတ်စ်လင်မ်တွေဟာ ကမ္ဘာအတွက် ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ဖြစ်တည်မှုအသွင်မျိုး ထုတ်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိတဲ့ အခုလိုကာလမျိုးမှာ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်း အရဗီဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆိုလာမှုတွေဟာ တိုးပွားနေပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့မှာ အရီဇိုးနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က အရဗီဘာသာစကားသင်ကြားရေးကို တက္ကသိုလ်တွင်းမှာ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အရဗီဘာသာစကားနယ်ပယ်အတွက် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့အသစ်တစ်ခုကိုတောင် သတ်မှတ်ပြဌားန်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ တက္ကသိုလ်ဟာ အရဗီသင်ကြားရေးကို လက်တွေ့မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် (Arabic Flagship Program) ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်အရ ကျောင်းသားတွေဟာ ပြည့်စုံတဲ့ အရဗီသင်တန်းတွေကို တက်ရောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီး အရဗီဘာသာစကားကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက် အရဗီစကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တစ်နှစ်တာ သွားရောက်လေ့လာသင်ယူခွင့်ကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှုးဖြစ်သူ စိုနီယာရှီရီက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“ အရဗီဘာသာရပ်မှာ အထူးဘွဲ့ရယူနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးရတဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ Arabic Flagship အစီအစဉ်ကို လာတက်ကြတဲ့ ကျောင်းသူတွေ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အရဗီစာပေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တရားဝင် ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ ရယူဖို့ လိုလားနေကြပါတယ်။ Arabic Flagship အစီအစဉ်ဟာ အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် ပညာရေးကဏ္ဍကနေ ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဖက်ဒရယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကမ္ဘာမှာ အလွန်အရေးပါတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို သင်ယူနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုးသား လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် အမျိုးသားရေးစွမ်းအင်တွေကို မြှင့်တင်ပေးဖို့အတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ”
အရီဇိုးနားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဟာ (Arabic Flagship ) အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်(၅)ခုအနက်က တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ အနာဂတ်မှာ စစ်တပ်က တပ်ကြပ်ကြီးတွေကို ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ဖို့ ပဏာမခြေလှမ်းသစ်ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။
အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ်မှာ တပ်ကြပ်တွေကို သင်တန်းပေးရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဘရိုင်ယာန်ဒိုနာယူက အရဗီသင်တန်းလျှောက်လွှာမှာ အခုလို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ အရဗီစကားကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင်ခြင်းဟာ အမေရိကန် လေတပ်ထဲဝင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ အလုပ်ဝင်ဖို့ အလွန့်အလွန် လိုအပ်နေတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုပါပဲ။ ”
သူက အခုလို ပြောကြားသွားပါသေးတယ်။
“ အရီဇိုနားတက္ကသိုလ်မှာ အရဗီဘာသာစကား အထူးပြုသင်တန်း ရှိနေခြင်းဟာ တော်တော့်ကို အကျိုးရှိစေပါတယ်။ ”
အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝှန်းမှာရှိတဲ့ အခြားတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေဟာလည်း အရဗီဘာသာစကားကို စတင်လေ့လာလိုက်စားခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်ကလည်း ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့က ကျောင်းသားရေးရာ သတင်းစာမျက်နှာမှာ အခုလို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
“ တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ အရဗီဘာသာစကား သင်ကြားပို့ချဖို့အတွက် သင်တန်း(၅)ခုအထိ တိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာ လာတက်တဲ့ ကျောင်းသားဦးရေဟာ ၂၀၁၀-ခုနှစ်ကထက် (၃)ဆလောက် တိုးမြှင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ ”
Tulane University ကလည်း ဒီလမတိုင်မီကပဲ အခုလို ကြေညာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
“ တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ အရဗီဘာသာရပ်ဌာနမှာ ဝင်ရောက်လာသူတွေ များပြားလာတဲ့အတွက် အရဗီဘာသာအထူးပြုဘွဲ့ကို မကြာခင်မှာ ပေးအပ်သွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ”
Inews-032/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » الأيام
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပေမယ့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်မှုမရှိ
20.2.17 Pakistan , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
လက်တလော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမယ့်လည်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နစ်နာမှု မဖြစ်စေခဲ့ဘူးလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် သတင်းစာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရင်နှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လုပ်မြဲ ဆက်လုပ်နေကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသား ဘလွန်းဘော့ဂ်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ လက်တလောအခြေအနေကိုကြည့်ရင် အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟာ နိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်နေထိုင်မှုစနစ်ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ ပါကစ္စတန်အစိုးရဟာ အကြမ်းဖက်မှုကို အဆုံးသတ်ခြေမှုန်းဖို့အတွက် တကယ့်ကို စွမ်းစွမ်းတမံနဲ့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ”
သူက အခုလို ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ပါကစ္စတန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဘယ်လိုမှ ထိခိုက်စေနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ”
ဘလွန်းဘောဂ်ဟာ ပါကစ္စတန်က သူတော်စင်ဂူဗိမာန်မှာ အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး အကြမ်းဖက်မှုလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ အခုလို ဆိုထားပါသေးတယ်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကရာချီမြို့အပါအဝင် အခြားမြို့ကြီးတွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တွန်းလှန်ခြေမှုန်းဖို့အတွက် လုံခြုံရေးတွေ အထူးချမှတ်ထားတဲ့အတွက် အခြေအနေ လုံးဝ ကောင်းမွန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘလွန်းဘော့ဂ်ဟာ အောက်တိုဘာလတုန်းက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးကောင်းမွန်တိုးတက်မှုနဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ စတော့ရှယ်ရာဈေးကွက်ကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Inews-031/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အွမ္မရဟ်နှင့် ကိုယ်တော့်ရောင်ဿွာတော်သို့ သွားရောက် ခစားခဲ့တဲ့ တူရ်ကီသမ္မတကြီး
19.2.17 Saudi Arabia , Turkey , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
တူရ်ကီသမ္မတကြီး သွိုင်ယိဗ် အာဒိုဂန်ဟာ မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်ရှိ ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးကို ဖူးမြော် (အွမ္မရာဟ်လုပ်) ခြင်းနဲ့ မဒီနဟ်ရွှေမြို့တော်ရှိ ကိုယ်တော်မြတ် ﷺ ရဲ့ ရောင်ဿွာတော်ကို ဇေယာရသ်လုပ် ခစားခဲ့ပါတယ်။
တူရ်ကီသမ္မတကြီးဟာ မိမိရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်း မဟာမိတ် အရဗ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကို ဝင်ရောက်လည်ပတ်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာ အွမ္မရဟ်နဲ့ ဇေယာရသ်ပြုလုပ်၍ ခရီးစဉ်ကို အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတကြီး သွိုင်ယိဗ် အာဒိုဂန်ဟာ ဦးစွာပထမ မဒီနဟ်ရွှေမြို့တော်ရှိ ကိုယ်တော်မြတ် ﷺ ရဲ့ ရောင်ဿွာတော်မှာ သွားရောက်ခစား၍ ဇေယာရသ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ မိမိရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူ မက္ကာဟ်ရွှေ့မြို့တော်ကို ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး အွမ္မရာဟ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သမ္မတကြီး သွိုင်ယိဗ်လာရောက်တဲ့အပေါ် ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များဘက်က ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ရွှေတံခါးတော်ကြီးကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ဝင်ရောက်ဖူးမြော်စေခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးဟာ မိမိရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတကွ လက်ရေပြင်တညီတည်း ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကြီးကို သွဝါးဖ်လုပ် လှည့်ပတ်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတဲ့အပြင် စွဖာ-မရ်ဝါတောင် နှစ်တောင်မှာလည်း စအီပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ မတ်စ်ဂျေ့ဒေ့ဟရာမ်မှာလည်း အိဗာဒသ်ပြု ခဝပ်ဆည်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါခရီးစဉ်မှာ သမ္မတကြီးအာဒိုဂန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ အာမိနဟ်အာဒိုဂန်အပါအဝင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဟလူစွီအကာရ်၊ စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊ သဘာဝစွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတအရင်းအမြစ်များဝန်ကြီး ဗရာသ်အလ်ဗာအိရ်က်နဲ့ လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုဦးစီးမှူး ဟာကာန်ဖိုင်ဒါန်တို့လည်း အတူတကွ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Inews-030/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » ARY TV
ပရိသတ်အာရုံကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ နယူးယောက်ဖက်ရှင်ရှိုးက ဟိဂျာဗ်မော်ဒယ်များ
19.2.17 ပျိုမေမွတ်စ်လင်မ် , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
နယူးယောက်မြို့တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကြီးတစ်ပွဲမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်သူ အနီစဟ်ဟာ ဟိဂျာဗ်လို့ခေါ်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရှက်သိက္ခာလုံခြုံတဲ့ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဟိဂျာဗ်ဆင်မြန်းထားတဲ့ မော်ဒယ်တွေဟာ စင်မြင့်ပေါ်မှာ တခြားဖက်ရှင်တွေကနေ ကွဲထွက်ပြီး တမူထူးခြားစွာ ပေါ်လွင်နေတာကြောင့် တက်ရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့အာရုံကို အပြည့်အဝ စွဲဆောင်ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၃၀) သာရှိသေးတဲ့ ဟိဂျာဗ်ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာ အနီစဟ်ဟာ အဆိုပါ ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကြီးမှာ ဆောင်းရာသီနဲ့ မိုးရာသီရဲ့ ဟိဂျာဗ်ဖက်ရှင်ဝတ်စုံတွေကို မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။
“ မြောက်မြားစွာသော မွတ်စ်လင်မ် မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ပုဝါလေးတွေနဲ့ ပတ်ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကျမဟာ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒါကိုပဲ ဖက်ရှင်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ ဖက်ရှင်လောကဟာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ကျမကလည်း အဲ့ဒီထဲက ပြောင်းလဲခြင်းတွေကို ယူဆောင်လာသူ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကျမမှာ အိပ်မက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Kate Middleton (ဗြိတိသျှတော်ဝင်မင်းသမီး) ဝတ်ဖို့အတွက် ဝတ်စုံလှလှလေးကို ကျမလက်နဲ့ ဖန်တီးပေးချင်တာပါ။ သူမဟာ ကျမ သိပ်သဘောကျတဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်လို့ပါ။ ” လို့ လူငယ် ဟိဂျာဗ်ဒီဇိုင်နာ အနီစဟ်က ပြောပြသွားပါတယ်။
အနီစဟ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်း နယူးယောက်မြို့တော်မှာ သူမရဲ့ အဝတ်အစားဖန်တီးမှုတွေကို ပြသခဲ့ပြီး ဟိဂျာဗ်ဝတ်စုံတွေကိုလည်း တပြိုင်နက်တည်း ချပြခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အနီစဟ်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ့်ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီးတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အပြင် မလေးရှား၊ တူရ်ကီနဲ့ ဒူဘိုင်းတို့မှာလည်း သူမရဲ့ အစ္စလာမ့်ဖက်ရှင်စတိုး ဆိုင်ခွဲတွေကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
MML-01/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » AAJ TV
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လောက် ကြာပြီးမှ ဂရိနိုင်ငံတွင် မွတ်စ်လင်မ်များအတွက် ပထမဆုံး ဗလီဆောက်လုပ်
18.2.17 Greece , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
၁၈၃၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဂရိနိုင်ငံမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက် စနစ်တကျ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ ပထမဦးဆုံးသော ဗလီတစ်လုံးကို ဆောက်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အဆိုပါ ဗလီသစ်ကြီးကို လာမယ့် ဧပြီလအတွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ၅ သိန်းပမာဏသော မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက် ရာစုနှစ်နှစ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဗလီဆောက်လုပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗလီမှာ လူပေါင်း ၃၅၀ လောက် တစ်ပြိုင်နက် စွလာသ်ဝတ်ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိနိုင်ငံမှာ အွတ်စ်မာနီအုပ်ချုပ်မှုကာလနောက်ပိုင်း ဗလီတွေအားလုံးကို ဖြိုဖျက်ရှဟီးဒ်လုပ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကာလနောက်ပိုင်းကတည်းက ယနေ့တိုင် ဂရိနိုင်ငံမှာ စနစ်တကျ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ ဗလီတစ်လုံးမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာတော့ ဒီဗလီဆောက်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ကြိုးစားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ဗလီဆောက်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ ဗလီသစ်ကြီးရဲ့ လိုအပ်သမျှသော မွမ်းမံချယ်သမှုတွေကို လုပ်ဆောင်မှုအပြီးသတ်မယ့် ဧပြီလတွင်းမှာတော့ ခမ်းနားစွာနဲ့ ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရိနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် အေသင်မှာ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ရွှေ့ပြောင်းမွတ်စ်လင်မ်တွေ အခြေချနေထိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ဟာ အိမ်တွေနဲ့ ဂိုဒေါင်ပျက်တွေမှာ အဆင်ပြေသလို စီစဉ်ထားကြတဲ့ ဝတ်ပြုစရာနေရာတွေမှာ မိမိတို့ရဲ့ ဘာသာရေး တာဝန်တွေကို ထမ်းရွက်ကျေပွန်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီဝတ်ပြုစရာနေရာတွေထဲမှာ မြောက်မြားစွာသော ဝတ်ပြုရာ ဗလီနေရာတွေအဖြစ် မြေအောက်ခန်းတွေနဲ့ မြေကွက်လပ်တွေကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လမှာ ဂရိနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် အလ်ယကတ်စ် စပ်ရာစ်က မိမိရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ သံန္ဓိဋ္ဌာန်ကို ဖော်ထုတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူအနေနဲ့ အေသင်မြို့မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက် မြို့တော်အတွင်း ပထမဦးဆုံးသော ဗလီကို တည်ဆောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး မွတ်စ်လင်မ်တွေအတွက် သီးသန့် သင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလည်း စီစဉ်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂရိပညာရေးဝန်ကြီးကတော့ မွတ်စ်လင်မ်တွေ ယာယီစွလာသ်ဝတ်ပြုဆောက်တည်လို့ရအောင် ယာယီ ဗလီတွေဆောက်လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုချက် လိုင်စင်တွေ ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လက်တွေ့မှာလည်း အကောင်အထည် ဖော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အဆိုပါနေရာတွေဟာ များသောအားဖြင့် လက်ယာစွန်းသမားတွေဘက်ယိမ်းတဲ့ ဂရိနိုင်ငံသား အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ပစ်မှတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အွတ်စ်မာနီအုပ်ချုပ်မှုကာလ ပြီးဆုံးတဲ့နောက်ပိုင်း ၁၈၈၀ ခုနှစ်မှာ ဗလီဆောက်လုပ်ဖို့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူး။ တစ်ကျော့ပြန်ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်က အိုလံပစ်အား ကစားပွဲတော်ကာလမှာ ဗလီဆောက်လုပ်ဖို့ စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းကွဲ အော်သိုဒေါက်စ် ချက်စ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း တည်ဆောက်ခွင့် တောင်းခံခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဗလီတည်ဆောက်ရေးကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာ မွတ်စ်လင်မ်ဦးရေ များပြားစွာ အခြေချနေထိုင်ကြပေမယ့် ဗလီတစ်လုံးမှာ မရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောမြို့တော်ဟာ အေသင်မြို့တော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-029/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » ARY TV
တန်ချိန်ထက်ဝက်နီးပါး အလေးချိန်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အဝဆုံး မိန်းကလေးကို ကီလို(၁၀၀) ထပ်မံဝိတ်ချရအုံးမည်
17.2.17 Egypt , India , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကိုယ်အလေးချိန် တန်ဝက်နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အဝဆုံးမိန်းကလေး အီမာန်အဗ်ဒွလ်အာသီဟာ ဆေးဝါး ကုသမှုခံယူဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်အရင်ကပဲ အီဂျစ်နိုင်ငံကနေ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ သူမကို ဆေးကုသပေးဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ ဆရာဝန်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကြေညာချက်ဟာ အီမာန့်အဖို ဝမ်းသာသတင်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
အီမာန်ကို ဆေးဝါးကုသပေးဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ ဆရာဝန်အဖွဲ့ဟာ စွာအိဖီဆေးရုံမှာ စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက် လက်တလော သူမကို ဆေးကုသဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းနဲ့ နောက်ထပ် ကီလို(၁၀၀)လောက်အထိ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချပြီးနောက်မှသာ ခွဲစိပ်ကုသဖို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အီမာန်အဗ်ဒွလ်အာသီဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အဝလွန်မှုရောဂါကုသရေး အထူးကုပါရဂူ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ လက်ဒါဝလာရဲ့ ကွက်ကဲမှုအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းမှာပဲ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ (၃၀) ကီလိုလောက်အထိ လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၄င်းဒေါက်တာဟာ သူမကို ခွဲစိပ်ကုသနိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ် ကီလို (၁၀၀) လောက် ဝိတ်ချပေးဖို့ လိုအပ်သေးတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ ဟိန္ဒူစတန်တိုင်မ်းသတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Inews-028/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » الأيام
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးရဲ့ (၁.၄) ထရီလီယံဖိုးလောက်ဟာ ဆေးလိပ်ကြောင့် ပြုန်းတီး
17.2.17 စီးပွားရေး , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၅၂ နိုင်ငံကို လေ့လာစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဆေးလိပ်သောက်သူဟာ ၇.၉၇ လောက်ရှိပြီး အာဖိက၊ အမေရိကတိုက်နှစ်ခု၊ မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေက ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးထွက်ကုန်ရဲ့ ၂% ပမာဏရှိနေပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ်မှာတော့ ဆေးလိပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအတွက် ၂၀% လောက် သုံးစွဲနေရပါတယ်။
ဆေးလိပ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏထဲက ၁.၄ ထရီလီရံ ဒေါ်လာငွေတွေ ကုန်ကျနေရပါတယ်။
ဆေးလိပ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သုံးစွဲနေရတဲ့ ငွေကြေးပမာဏဟာ ဆေးရွက်ကြီးအပေါ် ကောက်ခံတဲ့ အခွန်အတုပ်ထက် (၂၆၉) ဆလောက် ပိုနေရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ခွန်ရဲ့ ၇၅% သော ပမာဏဟာ ဆေးရွက်ကြီး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမှ ရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်အတွက် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးရဲ့ (၁.၄) ထရီလီယံဖြုန်းတီးမှုမှာတော့ ၄၀% ဟာ တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံတွေကဖြစ်ပြီး၊ ၂၅% ကတော့ ဘရာဇီး၊ ရရှား၊ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် ၃၅% ကတော့ အခြားသောနိုင်ငံတွေကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-027/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
အူရ်ဒူစာပေရဲ့ဖခင်ကြီး မိရ်ဇာ အစဒွလ္လာဟ် ဂါလိဗ်ရဲ့ (၁၄၈) နှစ်မြောက် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့
16.2.17 အထိမ်းအမှတ်နေ့ , အူရ်ဒူ
အူရ်ဒူစာပေရဲ့ဖခင်ကြီး၊ အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ကဗျာစာဆိုတော်ကြီး မိရ်ဇာ အစဒွလ္လာဟ်ခါန်း ဂါလိဗ်ရဲ့ ၁၄၈ နှစ်မြောက် အောက်မေ့ဖွယ်နေ့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၁) နှစ်သားအရွယ်မှာ စတင်ပြီး ကဗျာလင်္ကာတွေကို သီဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာစာဆိုတော်ကြီး အစဒွလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်တောင် သိချင်မှသိမယ့် အကြောင်းတစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ အူရ်ဒူကဗျာစပ်ဆိုသီကုံးမှုတွေဟာ အူရ်ဒူစာပေကို လက်ရှိခေတ်ခါသမယအထိတိုင်အောင် လင်းဝင်းတောက်ပစေခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိရ်ဇာ ဂါလိဗ်ရဲ့ အမည်ရင်းက အစဒွလ္လာဟ်ဗီးဂ်နဲ့ ဖခင်ရဲ့ အမည်က အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗီးဂ်ပါ။
၁၇၉၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ အာဂရဟ်ဒေသအတွင်း မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မိရ်ဇာဟာ ငယ်စဉ်ဘဝမှာပဲ ဖသက်ဆိုး ဘဝနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘကြီးတော်စပ်သူ မိရ်ဇာ နစ်ွရွလ္လာဟ်ဗီးဂ်က ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်း သူ ရှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာ ဘကြီးလည်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
စော်ဘွားကြီး အဟ်မဒ်ဗခ်ရ်ှခါန်က မိရ်ဇာရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို အင်္ဂလိပ်တွေဘက်ကနေ လစာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။
၁၈၁၀ ခုနှစ်၊ (၁၃) နှစ်သားအရွယ်မှာတော့ ထိုခေတ်ရဲ့ထုံးစံအရ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။
မိရ်ဇာဂါလိဗ်ဟ အူရ်ဒူစာပေရဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးသော ကဗျာစာဆိုတော်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူခံခဲ့ရပါတယ်။
အစောပိုင်းမှာတော့ ဖာရစီနဲ့ ခက်ခဲတဲ့ အူရ်ဒူစာပေတွေကို ကဗျာလင်္ကာတွေ စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အလွန်လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့ ခေတ်စမ်းစာပေ၊ ညက်ညောပြေပြစ်တဲ့ စကားလုံး၊ ဒဿနအတွေးအခေါ် မြော်မြင်မှုတွေနဲ့ လင်္ကာတွေကို စပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ပြိုင်စံရှား အူရ်ဒူစာပေရဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ကဗျာလင်္ကာစာပေပညာရှင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ အသက် (၇၂) နှစ် အရွယ် ၁၅-၂-၁၈၆၉ နေ့မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
SPD-01/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » ARY
အမေရိကန်က ထရမ့်နဲ့တူတဲ့ မိကျောင်းကြီး
16.2.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်တောင်ပိုင်း ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အသားရောင်ရှိတဲ့ မိကျောင်းတစ်ကောင်ကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒေသခံတွေက အဆိုပါမိကျောင်းရဲ့ အရောင်အဆင်းဟာ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ဆင်တူနေတဲ့အတွက် အဲဒီမိကျောင်းကို ထရမ့်မိကျောင်းလို့ မှည့်ခေါ်လိုက်ကြပါတယ်။
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရဲ့ ကန်တစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့ လိမ္မော်ရောင်ရှိတဲ့ အဆိုပါထရမ့်မိကျောင်းဟာ ၄ တောင်ကနေ ၅ တောင်လောက်အထိ အရှည်ရှိပါတယ်။
တောကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အဆိုပါ မိကျောင်းရဲ့ တစ်မူထူးခြားနေတဲ့ ဒီအရောင်ဟာ ရေကန်ထဲက ရေညှိကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့ သေချာစစ်ဆေးပြီးမှ အတိအကျ ပြောနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတ္တဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးကတော့ ဒီမိကျောင်းဟာ သံပိုက်လိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ အေးမြတဲ့ ဥတုရာသီအတွင်း ခိုလှုံနေထိုင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အတွက် သံပိုက်ရဲ့သံချေးတွေက မိကျောင်းပေါ် တက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချပါတယ်။
ဒီအရင်တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာလည်း မိကျောင်းတစ်ကောင် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီမိကျောင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ အလွန်မှ ဆန်းကျယ်ကြီးမားပြီး ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်ကတော့ တော်တော်လေး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သရဲကြီးတစ်ကောင်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီမိကျောင်းကြီးကိုတော့ ဂေါ်ဇီလာကြီးလို့ သတ်မှတ်ခေါ်တွင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။
Inews-026/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » ARY
15.2.17 ကာတွန်း , ရသအလင်း
နစ်မွန်းခြင်းနှစ်ရပ် (ကာတွန်း » Saudi Gazette)
CMM-01/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေး ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ မကြိုးစားကြနဲ့လို့ ပါကစ္စတန်သံတမန်သတိပေး
15.2.17 Pakistan , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကုလသမဂ္ဂမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ မလီဟဟ်လူဒီက ကုလအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အစ္စလာမ်ကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့ မကြိုးစားကြပါနဲ့လို့ သတိပေး ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်များ ကာကွယ်ရေး တံခါးဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ပါကစ္စတန်သံတမန်ကြီး မလီဟဟ်လူဒီက အခုလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီး ဘာသာတစ်ခုခု (ဒါမှမဟုတ်) လူမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကို ပစ်မှတ်ထားနေစရာ မလိုပါဘူး။ ”
သူမက အခုလို ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေတဲ့ကြားက အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘာကြောင့် တိုးပွားနေရတာလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးလေ့လာသုံးသပ် အဖြေရှာရပါလိမ့်မယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကို တွန်းအားဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေကိုသာ လိုက်လံဖြေရှင်းပေးဖို့က ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာ နားလည်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ”
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေတဲ့ တွန်းအားတွေကို ဖော်ပြရင်း မိမိတို့နိုင်ငံဟာ တွန်းအားတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေကတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ နောက်တစ်နိုင်ငံအကြားက ပဋိပက္ခဖြစ်မှု၊ အင်အားကို တရားမဝင် အသုံးချမှု၊ ပြင်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ ကျူးကျော်အနိုင်ကျင့်မှု၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး တန်းတူညီမျှမှု မရှိခြင်း၊ လူနည်းစု အခွင့်အရေးတွေကို ချိုးဖောက်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို တွန်းအားပေးနေတဲ့ အဲဒီအကြောင်းရင်းတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်းရင်းတွေကို အရင်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်မှသာ အချင်းချင်းကြားက အမုန်းတရားတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ”
Inews-025/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အကြမ်းဖက်ဝါဒကို အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အမုန်းစကားဖြန့်ချိမှုတွေကို တွန်းလှန်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော
15.2.17 Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သစ် အန်တိုနီယိုဂူသရစ်ဟာ ဒီလ (၁၂) ရက်နေ့က ဆော်ဒီနိုင်ငံ ရိယာဒ်မြို့တော်မှာ ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာဒိလ်ဂျုဗိုင်ရ်နဲ့အတူ ပူးတွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ကုလအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အမုန်းစကားပြောဆို ဖြန့်ချိနေတာတွေကို တွန်းလှန်ချေမှုန်းဖို့ဟာ အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ တိုက်တွန်းပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အစ္စလာမ့်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ ဆော်ဒီနိုင်ငံဟာ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို မိမိတို့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ ဆော်ဒီအစ္စလာမ့်နိုင်ငံကြားမှာရှိတဲ့ အပြန်အလှန် ကူညီရိုင်းပင်းမှုဟာ အကြမ်းဖက်မှု တွန်းလှန်ရေးကို အဓိက အခြေခံပါတယ်။ ”
ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာဒိလ်ဂျုဗိုင်ရ်ကလည်း ဒေသတွင်းက ဆီးရီးယားနဲ့ လစ်ဗျားနိုင်ငံအရေးတွေအပြင် အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်နဲ့ အသေအချာ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်အစိုးရသစ်နဲ့ ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေး ဘယ်လိုရှိပါသလဲဆိုတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ဦးရဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း ဝန်ကြီးဂျုဗိုင်ရ်က အခုလိုတုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“ ဆော်ဒီနဲ့ အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာ ထူးခြားကောင်းမွန်ပြီး စိန်ခေါ်မှု အမြောက်အမြားကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အရေးကိစ္စတော်တော်များများမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ကျနော်တို့ ညီညွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အရေးပါဆုံးကတော့ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ ကြားဝင် စွက်ဖက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ရေးကိစ္စတွေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
Inews-024/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
ဆဲလ်ဖီးဝါသနာအိုး ဆယ်လီတွေဟာ ဦးနှောက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများ
ဆဲလ်ဖီးမကြာခဏ ရိုက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
စားသောက်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေမှာ သမမျှတမှု မရှိစေတာ၊ အစီအစဉ်တွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်စေတာ၊ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချို့တဲ့တာတွေရဲ့ ဆက်စပ်မှုဟာ ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အချိန်ပေးနေလဲဆိုတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ကောက်ချက်ချထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆဲလ်ဖီးဆွဲတဲ့ အလေ့အကျင့်ဟာလည်း ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ကျရောဂါဟာလည်း ဆဲလ်ဖီးဆွဲခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးဆဲလ်ဖီးပုံကို ထင်သလောက် ချီးကျူးမခံရတာ (Like များများမရတာ) မျိုးတွေကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းလာစေပြီး စိတ်ကျရောဂါဆီကို ဦးတည်သွားစေပါတယ်။
ဆဲလ်ဖီးဝါသနာအိုး ဆိုရှယ်ဆယ်လီတွေအနေနဲ့ ပို့စ်မတင်ခင်မှာကတည်းက မိမိထင်သလောက်ဖြစ်မလာခဲ့ရင်ဆိုတာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။
မိမိတို့တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုဟာ Like လုပ် ချီးကျူးသြဘာပေးကြမယ့် လူတွေအတွက် ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်ထိများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်စဉ်စားပြီး ပို့စ်တင်သင့် မတင်သင့် ဆုံးဖြတ်တာဟာ အနည်းငယ် သက်သာစေနိုင်မယ်လို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
MSP-01/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ချစ်သူများနေ့ တရားဝင်ကျင်းပခွင့်မပြုကြောင်း ပါကစ္စတန်ဗဟိုတရားရုံး ဆုံးဖြတ်
14.2.17 Pakistan , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတဝှန်းမှာ ချစ်သူများနေ့အား တရားဝင်ကျင်းပခွင့်မရှိကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ မြို့တော်အစ္စလာမ်အာဘာသ်အခြေစိုက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဗဟိုတရားရုံးက စီရင်ချက်တစ်ရပ်ကို ချမှတ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါစီရင်ချက်ကို မနေ့က တနင်္လာနေ့မှာ ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ၎င်းအမိန့်ဟာ ချက်ခြင်းအာဏာသက်ရောက်ကြောင်းကိုပါ ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကြော်ငြာတွေဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ ဆုံးမသြဝါဒတွေနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေတဲ့အကြောင်း အဗ္ဗဒွလ်ဝဟာဗ်ဆိုသူက အဆိုတင်သွင်းပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့တာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက လက်ခံကြားနာ စစ်ဆေးပြီးနောက်မှာ အခုလို အမိန့်စီရင်ချက်ကို ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးရဲ့ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အရ ချစ်သူများနေ့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေကို အီလက်ထရွန်းနစ်နဲ့ ပုံနှိပ် မီဒီယာတွေမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခွင့် မရှိတော့တဲ့အပြင် ချစ်သူများနေ့ကို ရည်ရွယ်ဦးတည်ပြီး ရောင်းချနေကြတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အများမြင်ကွင်းမှာ ရောင်းချလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အစိုးရ အဆောက်အအုံတွေအတွင်းမှာလည်း ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကို ပြုလုပ်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။
Inews-023/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » Arab News
အစ္စလာမ့်ဥပဒေဖြင့် အုပ်ချုပ်သော ဆော်ဒီနိုင်ငံအား တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအရှိဆုံးသော နိုင်ငံအဖြစ် ကုလအတွင်းရေးမှုးချုပ်ပြောကြား
14.2.17 Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူသရစ်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆော်ဒီနိုင်ငံ ရိယာဒ်မြို့တော်မှာ ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာဒိလ်ဂျုဗိုင်ရ်နဲ့အတူ ပူးတွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ ဆော်ဒီနိုင်ငံဟာ ဒေသတွင်းမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအရှိဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာမှာ တကယ့်ကို စံနမူနာပြုထိုက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ”
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံဟာ အစ္စလာမ့်တရားဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီး စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အလေးအနက်ထားရာ မွန်မြတ်သော ကျောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ခုကိုလည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
Inews-022/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
ဆော်ဒီတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် ဂျင်မ်ကစားခန်းမများ ဖွင့်လှစ်ပေးမည်
13.2.17 Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံမှာ ယခုလအတွင်း အမျိုးသမီးသီးသန့် ဂျင်မ်ကစားခွင့်ခန်းမတွေကို ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်မှာ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသမီးတွေ ကျန်းမာရေးကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် ဂျင်မ်ကစားခွင့်လိုင်စင်ကိစ္စတွေကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆော်ဒီမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ သိရပါတယ်။
ဘုရင့်သမီးတော် ရီမာဗင်သေ့ ဗန်ဒရ်က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ ဆော်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဂျင်မ်ခန်းမတွေ တည်ထောင်ပြုလုပ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်အတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြူနီစပယ်ဝန်ကြီးဌာနဲ့ စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ဟာ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရာမှစ၍ ပြီးမြောက်သည်အထိ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေမှာ ပူးပေါင်းအကူအညီပေးသွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခန်းမတွေမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးအချိန်လျှော့ချဖို့၊ ကိုယ်ခန္ဓာလှပကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ဖို့၊ အပြေးနဲ့ ကာယလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် လွယ်ကူအထောက်အကူဖြစ်စေရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးကစားခြင်း၊ ဘောလီဘော၊ ခရစ်ကတ်၊ ဘတ်စ်ကတ်ဘော ကစားခြင်းနဲ့ တင်းနစ်ရိုက်ခြင်း အစရှိတဲ့ အုပ်စုနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားရတဲ့ အားကစားတွေကိုတော့ ဂျင်မ်ခန်းမတွေမှာ ဆော့ကစားခွင့်လိုင်စင်ကို ထုတ်မပေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အခုလို ဂျင်မ်တွေတည်ထောင်ပေးရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အသိတရားတွေ နိုးကြားပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သူတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသမီးတိုင်း ပါဝင်လာအောင်လည်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကို ကျယ်ပြန့်စွာ စီစဉ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Inews-021/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » SAMAA
12.2.17 Russia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ရရှားနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ရေခဲစာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
ရှားပါးပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်ရဲ့ ရေခဲနံရံတွေအပေါ်မှာ စာဆိုအမျိုးမျိုး၊ ဝါကျအဖုံဖုံကို ခမ်းနားစွာရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြိုင်ဘက်မရှိ တောက်ပြောင်ခန့်ညားလှတဲ့ အဲဒီစာကြည့်တိုက်လေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးက ကျော်ကြားတဲ့ စာပေပညာရှင်တွေဟာ မိမိတို့နှစ်သက်ရာ ဝါကျအဖွဲ့အနွဲ့တွေ၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ စာသားတွေ၊ စာတိုပေစတွေကို ပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။
ပေးပို့လာတဲ့ စာသားတွေကို ရေခဲနံရံတံတိုင်းတွေအပေါ် ထွင်းထုရေးသားပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့လူအသုံးများတဲ့ ဘာသာစကားအချို့ရဲ့ စာပေကျမ်းဂန်တွေကနေ ကောက်နုတ်ရယူခဲ့တဲ့ စာသားတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
သာမန်စာကြည့်တိုက်တွေလို အမိုးအကာမရှိဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ မိုးကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ သေသပ်ရိုးရှင်းစွာ ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တဲ့ ဒီစာကြည့်တိုက်လေးဟာ ဧပြီလအထိပဲ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ဥတုရာသီတွေ စတင်လာရင်တော့ ဒီစာကြည့်တိုက်လေးဟာ နှမြောဖွယ်ကောင်းစွာပဲ အရည်ပျော်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-020/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » ARY TV
အမေရိကန် ကဗျာစာဆိုတော်ပြိုင်ပွဲမှာ အစ္စလာမ်ကို ကာကွယ်ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာများ
11.2.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေ လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါ မုန်တိုင်းထန်နေစဉ် ကာလမျိုးမှာ အမေရိကန်ကဗျာစာဆိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ အစ္စလာမ်ကိုကာကွယ်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ပရိသတ်ရှေ့မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ ရွတ်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
“ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၇) ရက်နေ့ Delen Rove ဆိုသူဟာ သမ္မာကျမ်းစာ သင်ယူဆည်းပူးနေကြတဲ့ လူအုပ်စုထံ ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိလာတယ်။ သူတို့ကြားထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ သူတို့လိုပဲ ဝတ်ပြုတယ်။ ပြီးတော့ လက်နက်ထုတ်တယ်။ တစ်ယောက်ပဲ အရှင်ထားပြီး အားလုံးကို သတ်ပစ်တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ပြီးတဲ့နောက် Delen Rove ကို ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားရှင်ကို တို့တတွေ သံသယ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ သူဟာ အာဖရိကတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အမျိုးသားရေးအမှတ်လက္ခဏာကို ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွှယ်တဲ့သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ တို့တတွေ သံသယ မဝင်ခဲ့ကြဘူး။ ”
Rudy Francisco နဲ့ Natasha Hooper နဲ့ Amen Ra တို့ သုံးဦးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကဗျာစာဆိုပြိုင်ပွဲမှာ အထက်ပါစကားလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကို အစပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီကဗျာပြိုင်ပွဲဟာ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအသစ်တစ်ခုခုကို တင်ဆက်ပြရပါတယ်။
ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားသုံးဦးကတော့ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုအဖြစ် “ အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ” ဆိုတဲ့ ကွဲထွက်တဲ့ ဖန်တီးမှုကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အလားတူပင် ခရစ်ယာန်လူဖြူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူရာနဲ့ချီပြီး သေကြေခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ချို့ကို တင်ပြသွားခဲ့ပြီး အဲဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ဘယ်သူကမှ အကြမ်းဖက်သာသနာလို့ စွပ်စွဲတာ၊ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ လာပြီးသမုတ်ကြတာတွေ မရှိခဲ့ကြောင်း။ ဘယ်သူကမှလည်း သူတို့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံကနေ ထွက်သွားဖို့ တောင်းဆိုတာမျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ ဝတ်စားပုံကို ပြောင်းလဲခိုင်းတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ လူဖြူတချို့ရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို အခြေခံပြီး လူဖြူအားလုံးကို အကြမ်းဖက်သမား စာရင်းမှာလည်း မသွင်းခဲ့ကြပါဘူးလို့ ရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဆုံးမှာ သူတို့သုံးဦးဟာ မွတ်စ်လင်မ်တချို့ရဲ့ အမှားကို အခြေခံပြီး မွတ်စ်လင်မ်အားလုံးကို အပြစ်ဖို့တာ မလုပ်ကြဖုိ့ တောင်းဆိုလိုက်ပြီး IS ကို နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုးနေတယ်လို့ စွပ်စွဲချက်တွေ ထွက်ပေါ်ခံထားရတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကိုပဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေကို မယုံသင်္ကာ မဖြစ်ကြဖို့နဲ့ လူတွေကြားမှာ အမုန်းစကားတွေ ဖြန့်ချိပြီး ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ပြောနေတဲ့ အစွန်းရောက်တွေရဲ့စကားကို နားမထောင်ကြဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးနောက် သူတုိ့ရဲ့ တင်ဆက်မှုကို “ အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်း (အသင်တို့အပေါ် ငြိမ်းချမ်းမှုအဖြာဖြာ ခညောင်းပါစေသား) ” ဆိုတဲ့ အစ္စလာမ့်ငြိမ်းချမ်းရေး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Inews-019/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
တက်ဆက်ပြည်နယ် ဗလီ မီးရှို့သူကို ဖမ်းဆီးရေး ဒေါ်လာ (၃) သောင်း ဆုငွေထုတ်
10.2.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
၂၈-၁-၂၀၁၇ (စနေနေ့) က မီးဘေးသင့်၍ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့သော ဗစ်တိုးရီးယားဗလီ
ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ တက်ဆက်ပြည်နယ် ဗစ်တိုးရီးယားမြို့က ဗလီကြီးမီးဘေးသင့်တာဟာ သာမန်မီးလောင်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ မီးရှို့ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဗလီကြီးကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့ တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် အကူအညီပေးတဲ့သူကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသောင်းဆုတော်ငွေချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေအကြံပေးရုံးတော်က ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
“ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်အရင်က တက်ဆက်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအတွင်းမှာ ဗလီတစ်လုံးဟာ ရိုးရိုးမီးသင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ မီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တင်ပြချက်အရ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဗလီအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး မီးသင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကတော့ ဒေါ်လာ သန်းတစ်ဝက်ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမီးရှိုတဲ့ ရာဇဝတ်သားကို ဖမ်းမိအောင် ကူညီတဲ့သူကို ဒေါ်လာသုံးသောင်း ဆုချီးမြှင့်ပေးပါမယ်။ ” လို့ အဆိုပါရုံးတော်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ မီးရှို့ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမြောက်/မမြောက်ကိုတော့ လတ်တလော အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ အမေရိကန်အစိုးရဘက်က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် မွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဘက်ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်အပေါ် အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက် FBI အပါအဝင် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများဟာ လိုအပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ချက်ချင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အကြောင်းရင်းကို အမြန်ဆုံး ထုတ်ပြန်ကာ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလည်း အလေးအနက်ထား၍ လုပ်ဆောင်နေကြတာကို အားရဖွယ် မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Inews-018/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
မြုပ်နှံပြီး (၃၅) ရက်ကြာ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်ခဲ့ရာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြင့် မြင်တွေ့ရ
10.2.17 Egypt , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မုဟမ္မဒ် အဗ်ဒွလ်ဝဟ်ဟာဗ် မကွယ်လွန်ခင်က ဓာတ်ပုံ
အီဂျစ်နိုင်ငံ ကောင်စ်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုပါ။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို လူ့ဦးနှောက်နဲ့ လက်ခံဖို့ ဆန်းပြားနေပေမဲ့ မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေက ဒီအဖြစ်အပျက် မှန်ကန်ကြောင်းကို ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ကောင်စ်မြို့ရဲ့ မက်ရဗီယဟ်ဆိုတဲ့ ရွာလေးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
အဲဒီရွာမှာ အသက်(၅၅)နှစ်အရွယ်ရှိ မုဟမ္မဒ် အဗ်ဒွလ်ဝဟ်ဟားဗ်ဆိုသူ ကွယ်လွန်ပြီး (၃၅) ရက်ကျော်လွန်တဲ့အခါ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေက သူ့ရုပ်ကလာပ်ကို မြုပ်နှံထားတဲ့သင်္ချိုင်းကနေ နောက်တစ်နေရာမှာ ပြောင်းရွှေ့မြုပ်နှံခွင့် တောင်းခံခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မုဟမ္မဒ် အဗ်ဒွလ်ဝဟ်ဟာဗ်ဟာ သူ့ရဲ့ မိသားစုဝင် တော်တော်များများကို အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကဗရ်ကို သူမသေခင် အမြဲတမ်း အိဗာဒသ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာ ရွှေ့ပြောင်းပြီး မြုပ်နှံပေးဖို့ အိပ်မက်ပေးခဲ့တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ဆိုပါတယ်။
အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက လုံခြုံရေးတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ အဲဒီရုပ်အလောင်းကို ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ အမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကဗရ်တူးဖော်တာကို စောင့်ကြည့်ခဲ့သူအားလုံး အံ့သြ မှင်တက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
“ သူ့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းဟာ အကောင်းပကတိအတိုင်းပါပဲ။ အနံ့ထွက်တာ၊ ပုပ်ပွတာမျိုးတွေ လုံးဝ မရှိသေးပါဘူး။ အပေါ်ယံ ကြည့်ရုံနဲ့ဆိုရင် ဒီရုပ်အလောင်းဟာ (၃၅) ရက်ကြာနေတာလို့ မထင်ရဘူး။ အခုမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သေဆုံးထားတဲ့ ရုပ်အလောင်းလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ” လို့ ပြန်လည်တူးဖော်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က မှုခင်းဆရာဝန်က တူးဖော်ပြီးနောက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မုဟမ္မဒ်အဗ်ဒွလ်ဝဟ်ဟာဗ်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ကဗရ်အသစ်မှာ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ သယ်ဆောင်တဲ့အခါ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေအားလုံးဟာ သက်ဗီရ်ရွတ်ဆိုပြီး လိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူဟာ အမြဲတမ်း အိဗာဒသ် (ကောင်းမှုကုသိုလ်) မှာ မွေ့လျော်နေတတ်သူ။ လောကီကို မခင်တွယ်သူ။ အများကောင်းကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်သူ ဖြစ်တယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရွာသူကြီးဖြစ်တဲ့ ဟာဂျီဂိုလာမ်ကလည်း ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
“ ကွယ်လွန်သူဟာ တကယ့်ကို သူတော်စင် သူတော်ကောင်းပါ။ သူ့လို ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူမျိုး ကျနော့်တစ်သက် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး။ သူဟာ ရွာသားတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို စွမ်းစွမ်းတမံနဲ့ လိုက်ပါကူညီ ဖြေရှင်းပေးလေ့ ရှိသူပါ။ သူဟာ အရမ်းကို စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး မြင့်မားတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သစ္စာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကလည်း သူ့ကို ချစ်ခင်ကြပါတယ်။ သူဟာ အချိန်တော်တော်များကို အိဗာဒသ် (ကောင်းမှုကုသိုလ်) မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ”
Inews-017/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » العربية
ဗလီမီးရှိုသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား နှစ် (၃၀) ထောင်ကျပြီ
9.2.17 United States of America , ကမ္ဘာ့သတင်း , သတင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ဗလီမီးရှိုမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် နှစ် (၃၀) ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ အမေရိကန်တရားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အဆိုအရ အသက် (၃၂) နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Joseph Schreiber ဆိုသူဟာ Fort Pierce မှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ့်စင်တာကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလက အကြမ်းဖက် မီးရှိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သိန်းကျော်လောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ရှိုမီးကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ မရှိခဲ့ပေမယ့် ၎င်းအစ္စလာမ့်စင်တာကြီးကိုတော့ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရတဲ့အတွက် နေ့စဉ်ဆွလာသ်ဝတ်ပြုမှုတွေကို နေရာပြောင်းရွှေ့ပြီး ဝတ်ပြုနေကြရပါတယ်။
Inews-016/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » سكاي نيوز عربية
၂၀၁၆ တစ်နှစ်တည်းမှာပင် ဒူဘိုင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ ၁၅ သန်းရှိ
9.2.17 United Arab Emirates , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဒူဘိုင်းရဲ့ ခရီးသွားလာရေးနဲ့ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဦးစီဌာနရဲ့ ကြေညာချက်အရ ၂၀၁၆ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဒူဘိုင်းကို လာရောက်လည်ပတ်သူဦးရေ ၁၅ သန်းအထိ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ထက် ၅% မြင့်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒူဘိုင်းကို လာရောက်လည်ပတ်သူ အများစုဟာ အိန္ဒိယ၊ ဆော်ဒီနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဒူဘိုင်းအစိုးရရဲ့ ပြန်ကြားရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဒူဘိုင်းကို အလည်အပတ်လာရောက်သူ နိုင်ငံခြားသားဦးရေ ၁၄.၂ သန်းရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကထက် ၇.၅% တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသည် သန်း ၂၀ လောက်ထိ လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံဟာ ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် Expo 2020 ပြပွဲကိုလည်း ဒူဘိုင်းနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-015/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » سكاي نيوز عربية
အက္ကစွာဗလီကြီးသို့ ဘုရားဖူးသွားလိုသော အစိုးရဝန်ထမ်း ခရစ်ယာန်တွေကို (၁)လတာ ရက်ရှည်ခွင့်ပေးမည့် အီဂျစ်
8.2.17 Egypt , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
အီဂျစ်အစ္စလာမ့်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအလုပ်တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ လူနည်းစု ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဗိုင်သွလ်မက္ကဒိစ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးဆီသို့ သွားရောက်၍ ဘုရားဖူးလည်ပတ်ဖို့အတွက် (၁)လတာ ရက်ရှည်ခွင့်ပေးမယ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစိုးရဌာနတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးထုံးတမ်းဓလေ့များ ပြုကျင့်ဆောက်တည်နိုင်ဖို့ ဗိုင်သွလ်မက္ကဒိစ် ဗလီဝတ်ကျောင်းကြီးရှိရာကို ဘုရားဖူးသွားရောက်လည်ပတ်လိုပါက လစာခံစားခွင့်နှင့်အတူ ရက်ရှည်ခွင့် (၁)လတိတိ ပေးသွားရမယ်လို့ အီဂျစ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မတိုင်မီကလည်း အီဂျစ်နိုင်ငံဟာ လူများစု မွတ်စ်လင်မ် အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအတွက် ဟဂ်ျတာဝန်ကျင့်ဆောက်တည်ဖို့ အထက်ပါအတိုင်းပင် လစာနဲ့အတူ (၁) လတာ ရက်ရှည်ခွင့်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Inews-014/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ကအ်ဗာအနီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မှုဖြစ်ပွား
8.2.17 Saudi Arabia , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မက္ကာဟ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ မတ်စ်ဂျေ့ဒေ့ဟရာမ် (ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီး) အနီးမှာ မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားသူတစ်ဦးကို ဆော်ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့က အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်အရ အခင်းဖြစ်ပွားမှုဟာ တနင်္လာနေ့ညပိုင်းအချိန် ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ အနီးအနားလေးမှာတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ သေကြောင်းကြံစည်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
၎င်းကိစ္စကိုအခြေခံပြီး ဆိုရှယ်လူမှုကွန်ယက်တချို့မှာတော့ ကအ်ဗာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ ဂိလာဖ် လွှမ်းခြုံလွှာကို မီးရှို့ဖို့ကြိုးစားခြင်းအဖြစ် ကောလဟလတွေကို ဖြန့်ဝေနေတာကြောင့် သတင်းမှားသာဖြစ်၍ မယုံကြည်ကြဖို့နဲ့ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုကြဖို့ကို လုံခြုံရေးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က သတိပေး ပြေကြားလိုက်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ မွန်မြတ်ထူးကဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်ခွင့် လုံးဝမရှိပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်၊ မဖြစ်ဆိုတာကတော့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင် အသိဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေမယ်ဆိုရင် ထာဝရ ဂျဟန္နမ် အပါယ်ငရဲဘုံမှာ ပြစ်ဒဏ်ခံစားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာ မိန့်မှာထားပါတယ်။
Inews-013/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
အွန်လိုင်း လုပ်ကြံသတင်းများ ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်း ပြင်သစ်တွင်စတင်
7.2.17 France , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဖေ့စ်ဘုခ်နဲ့ ဂူဂဲလ်တို့ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သတင်းမှားတွေ၊ လုပ်ကြံလီဆယ်တဲ့ပို့စ်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့အတွက် ပေါင်းစည်းရေးကမ်ပိန်းတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပါတယ်။
လက်တလောဖြစ်စဉ်များကို အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့ သတင်းတွေမှာ မဟုတ်တဲ့အသိတွေ၊ မရေရာတဲ့ဖြန့်ဝေမှုတွေကို တားမြစ်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖေ့စ်ဘုခ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့လမှာကတည်းက ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ အခုလို ကမ်ပိန်းမျိုးကို စတင်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ယခုအစပြုလိုက်တဲ့ ဒီကမ်ပိန်းကတော့ ပိုပြီး ထူးခြားပြည့်စုံလှပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုအခါမှာ ဖေ့စ်ဘုခ်နဲ့ ဂူဂဲလ်တင်မကဘဲ ISP တွေအပါအဝင် ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ရေစီးကြောင်းပေါ်က အရေးပါတဲ့ သတင်းမီဒီယာကြီးတွေကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
အဆိုပါကမ်ပိန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ဧပြီလအတွင်း ကျင်းပမယ့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သတင်းမှားမျိုးရဲ့ သက်ရောက်မှုကိုမှ မရရှိစေဖို့အတွက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာတော်မှာတော့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်က ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာ “ အသင်တို့ဆီကို မကောင်းတဲ့သူတစ်ဦး တစ်ယောက်က သတင်းတစ်ခုခု သယ်ဆောင်လာရင် သေချာစူးစမ်းပါ။ ဝေကွဲအောင်လုပ်ပါ။ ” လို့ မိန့်ကြားထားတဲ့အပြင် “ ကြားလေသမျှစကားကို စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲ ပြန်လည်ဖောက်သည်ချတဲ့သူဟာ လူလိမ်ဖြစ်တယ် ” လို့ တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ် ﷺ ကလည်း မိန့်မှာထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် သတင်းလိမ်၊ သတင်းမှားတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဝါဒဖြန့်တာ၊ ကောလဟလထုတ်လွှင့်နေတာကို အစ္စလာမ်သာသနာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချထားတယ်ဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Inews-012/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ဂျော်ဒန် အစ္စလာမ့်နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲက ဘာသာရေးအကြောင်းအရာတွေကို ဖယ်ထုတ်
6.2.17 Jordan , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဂျော်ဒန်ပါလီမန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိုယ်စားလှယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ ဒါအလ်အာသူမ်ဟာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်အရ ဘာသာရေးအကြောင်းအရာ တော်တော်များများကို ဖြုတ်ချပစ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်းရှိ လူနည်းစုများကို စာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် ယခုကဲ့သို့သော ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဒါအလ်အာသူမ်က ပြောပါတယ်။
အခုလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဂျောဒန်နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲမှာ အစ္စလာမ့်ပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိစေဘဲ အခြားတိုင်းတစ်ပါးရဲ့ ခြေရာလက်ရာတွေချည်းပဲဖြစ်လာမှာ စိုးရိမ်မိတယ်လို့ ဆရာ၊ ဆရာမများ အသင်းက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
Inews-011/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် လူမျိုးဘာသာစုံ လူထုချီတက်ပွဲဖြင့် မွတ်စ်လင်မ်များနှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်
6.2.17 Canada , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကနေဒါနိုင်ငံ ကျူးဗတ်စ်မြို့မှာ ရာပေါင်းများစွာသော လူမျိုး၊ ဘာသာစုံ လုထူကြီးဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေနဲ့ တစ်သွေးတစ်သားတည်းရှိကြောင်း ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ ချီတက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Halifax ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးရှေ့မှာ ရာပေါင်းများစွာသော လူမျိုး၊ ဘာသာစုံပါဝင်တဲ့ လူထုကြီးဟာ လက်ချင်းချိတ်ပြီး မွတ်စ်လင်မ်တွေနဲ့ တစ်သားတည်းရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ကျူးဗတ်စ်မြို့ရဲ့ ဗလီတစ်လုံးကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး လူ(၆)ဦး ကွယ်လွန်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် မိမိတို့ ကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဟာ မွတ်စ်လင်မ်တွေဘက်က ရပ်တည်ကြောင်းနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဖော်ပြဖို့အတွက် ယခုလို လူထုချီတက်ပွဲကြီးကို သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ ကျင်းပခဲ့ကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ချီတက်ပွဲကြီးမှာ မွတ်စ်လင်မ်တွေလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အနီးမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကနေ စတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး မြို့တော်ခန်းမရှေ့ထိ ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ချီတက်ပွဲမှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသူတွေဟာ “ အစ္စလာမ်ကြောက်ရောဂါ လက်မခံပါ ” “ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုသာ ဒို့လိုလားသည် ” “ နှလုံးသားတံခါးတွေကို ဖွင့်ထားကြပါ ” အစရှိတဲ့ အမျိုးသားရေးအကြမ်းဖက်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေကို ကိုင်ဆောင်ပြီး လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဟစ်ကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။
Inews-009/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ပြည်မြို့ ရွှေကြာပင်ဗလီတွင် ရှဟီဒီဦးကိုနီအတွက် အီဆွာလေ့ဆဝါဗ်ပြုလုပ်
6.2.17 Myanmar , ပြည်တွင်း , သတင်း
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ခြမ်း၊ ပြည်မြို့၊ ကျောင်းကြီးအိုးတန်းရပ်ကွက်၊ ပန်းထိမ်လမ်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် ရွှေကြာပင်ဗလီမှာ မနေ့က ကွယ်လွန်သူ အာဇာနည် သူရဲကောင်း ရှဟီဒီ အဗ္ဗဒွလ်ဂနီ (ခ) ရှေ့နေကြီး ဆရာ ဦးကိုနီနဲ့ ကွယ်လွန်သူ အာရ်ဝါအပေါင်းကို ရည်စူးပြီး ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် ခသမ်ဖတ်ရွတ်ခြင်းနဲ့ ဇစ်ကစ်ရ်စိတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မနေ့က (၅-၂-၂၀၁၇) တနင်္ဂနွေနေ့ မဂ်ရိဗ်နမားဇ်အပြီးကနေ အိရှာဟ်အဇာန်ချိန်အထိ အိမာမ်ရှေ့ဆောင်နှင့်တကွ၊ ဗလီတာဝန်ရှိသူများ၊ ဂျမာအသ်ဝင်များ၊ ကျောင်းသား/သူ ကလေးငယ်များ စုပေါင်းကာ ကုရ်အာန်ခသမ် (၁) ကြိမ်နှင့် ဇစ်ကစ်ရ်အကြိမ် ထောင်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ရွတ်ပြီး ရှဟီဒီ ဦးကိုနီနဲ့တကွ ကွယ်လွန်သူအာရ်ဝါများအတွက် အီဆွာလေ့ဆဝါဗ် ပို့သပေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အထက်ပါ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်အပြီးမှာတော့ ကွယ်လွန်သူများကို ဘဝတစ်ပါးမှာ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်စေဖို့၊ ၎င်းတို့ရဲ့ အကုသိုလ်ပြစ်မှုများကို ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာမှုပေးသနားပြီး ဂျန္နသ်သုခဘုံမှာ စံမြန်းခွင့်ပေးသနားဖို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ထံမှာ ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများ ကျန်းမာချမ်းသာကြစေဖို့၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကို အသက်ရှည် အနာမဲ့စွာ ထားရှိပေးဖို့နဲ့ အေးချမ်းသာယာပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော ကမ္ဘာ့အလယ် တင့်တယ်စေမယ့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အမြန်ဆုံးဖြစ်ထွန်းပါစေလို့လည်း ဗလီရှေ့ဆောင်ဆရာကြီးမှ ဦးဆောင်၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ထံမှာ ဒိုအာဆုမွန်တွေကို တောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Mnews-006/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
ကျဆုံးခဲ့သော ရှဟီဒီကြီး ဦးကိုနီ၏ ဇေယာရသ် အားမ်ဒအ်ဝသ်
5.2.17 Myanmar , Video , ပြည်တွင်း , သတင်း
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့ နံနက် (၁၁) နာရီမှစတင်၍ နိုင်ငံ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အသက်ပေးစတေးခဲ့ရသူ ရှဟီဒ် အဗ္ဗဒွလ် ဃနီ (ခ) အာဇာနည် ဦးကိုနီနှင့် ကွယ်လွန်သူ အရ်ဝါများအတွက်ရည်စူးပြီး ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ ဇေယာရသ် အားမ်ဒအ်ဝသ် (ကုသိုလ်ပြု စတုဒီသာအလှူတော်) ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၂)လမ်းထိပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ်မှာြုပုလုပ်ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ ၎င်းအားမ်ဒအ်ဝသ်အလှူတော်သို့ လူမျိုး၊ ဘာသာစုံမှ ရာနှင့်ချီသော လူပေါင်းများစွာ လာရောက်၍ အားပေးသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယမန်နေ့ (၄-၂-၂၀၁၇) စနေနေ့ကလည်း အဆိုပါနေရာမှာ အကြမ်းဖက်သမားလက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီနှင့် ယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်း တို့အတွက် ရည်စူးပြီး ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား စတုဒီသာအလှူတော်ကြီးတစ်ခုကို နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကလည်း ပူးပေါင်းအားဖြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
Mnews-005/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/pwn01LT-ZME
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၅) သန်းကျော် ရှိလာပြီ
5.2.17 သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကော်မရှင်ဌာနချုပ်က ရေတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အရေအတွက်အရ ယခုအချိန်မှာ တူရ်ကီနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည်အများဆုံး ရောက်ရှိနေထိုင်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါ တူရ်ကီနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံနေထိုင်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ (၃၁) သိန်းလောက် ရှိနေပါတယ်။
ဒုတိယအရေအတွက်အများဆုံးကတော့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါကစ္စတန်မှာတော့ (၁၆) သိန်းသော ဒုက္ခသည်တွေ ခိုလှုံနေထိုင်နေကြပါတယ်။
လဗ်နွန်နိုင်ငံမှာ (၁၁) သိန်း၊ အီရန်နိုင်ငံမှာ (၈) သိန်းနီးပါး၊ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံမှာ (၇) သိန်းကျော်၊ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာ (၆.၅) သိန်းကျော်၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ (၅.၅) သိန်းကျော်၊ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာ (၄) သိန်းကျော်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံမှာ (၄) သိန်းကျော်၊ ဆူဒန်နိုင်ငံမှာ (၃.၅) သိန်းကျော်၊ အီတလီနိုင်ငံမှာ (၁) သိန်းကျော်၊ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ (၁.၅) သိန်းကျော်၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံမှာ (၇) သောင်းနီးပါး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ (၃) သိန်းနီးပါးနဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ (၃) သိန်းကျော်လောက် အသီးသီးခိုလှုံနေထိုင်နေကြပြီး အခြားနိုင်ငံများစွာမှာလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
၎င်းအဖွဲ့ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယခုနှစ် ၂၀၁၇ အစောပိုင်းကာလမှာတင် ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ဒုက္ခသည်ဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၅) သန်းကျော်လောက် ရှိလာနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါစာရင်းဇယားညွှန်းကိန်းတွေအရ အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတွေဆီကို ဒုက္ခသည်တွေ ဝင်ရောက်ခိုလှုံမှုဟာ အများဆုံးဖြစ်နေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Inews-010/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ထရမ့်ဥပဒေ ပျက်ပြယ်တော့မှာလား?
5.2.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံတချို့မှ နိုင်ငံသားတွေ အမေရိကန်ကို မဝင်ရဘူးလို့ တားမြစ်တဲ့ထရမ့်ရဲ့ ဥပဒေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ စီယာတလ်မြို့ တရားသူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ အမေရိကန် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အသက်ဝင်နေတဲ့ ထရမ့်ဥပဒေ ဆက်လက်တည်မြဲရှင်သန်ရေး အာမခံချက်ရှိစေဖို့အတွက် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ ၎င်းအမှုကို အမြန်ဆုံး ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတော်ကို တင်သွင်းပြီး ပိုမိုခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်မယ်လို့ အိမ်ဖြူတော်ကလည်း ဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။
ဖွင့်ဟပြောဆိုချက်တွေထဲမှာတော့ အိမ်ဖြူတော်ဟာ ခိုလှုံသူတွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ထရမ့်ဥပဒေကို ခတ္တရပ်ဆိုင်းမယ့်ကိစ္စကို ဆန့်ကျင်ပြီး တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
“ သမ္မတဟာ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ရေးအတွက် အဓိကဦးတည်ပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ အခြေခံဥပဒေကို သုံးစွဲခွင့်အာဏာနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ် ” လုိ့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်ရဲ့ဥပဒေထဲက တချို့ဟာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိတာကြောင့် ရပ်ဆိုင်းရမယ့်လို့ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် တရားသူကြီး ဂျီးမက်စ်ရူဗတ်က အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အခုလို ပြင်းထန်တဲ့ နိုင်ငံရေးပွတ်တိုက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်ဥပဒေတွေဟာ မွတ်စ်လင်မ်များအပေါ် လူမျိုးရေးဆန့်ကျင်ခွဲခြားခြင်းဖြစ်တာကြောင့် အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ ရှေ့နေတွေဟာ ထရမ့်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး မင်နီဆိုးတားနဲ့ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်နှစ်ခုက တရားရုံးတွေမှာ အမှုတင်သွင်းပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့တာကြောင့် တရားရုံးက စီရင်ချက်မချခင်အချိန်ထိ ထရမ့်ဥပဒေကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရမယ်ဆိုတဲ့ အမိန့်ကတော့ ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်တရားရုံးက ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အဆိုပါရပ်ဆိုင်းထားရမယ့်အမိန့်ဥပဒေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ် (၅၀) စလုံးမှာ အမှုကိုစီရင်ချက်ချပြီးတဲ့အချိန်အထိ အသက်ဝင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါ ပြည်နယ်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုခုက ၎င်းထရမ့်ဥပဒေကို အခြေခံဥပဒေနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ ၎င်းဥပဒေများဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ပျက်ပြယ်သွားတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Inews-008/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းကျင်းပခဲ့
5.2.17 သတင်း , အထိမ်းအမှတ်နေ့ , နိုင်ငံတကာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီ လ (၄) ရက် (ယမန်နေ့) ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းမှာ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကင်ဆာရောဂါကို လူသားတွေ သတိဝီရိယရှိနေကြစေဖို့နဲ့ အဲဒီရောဂါကနေ ရှောင်ရှားဖို့ အကြောင်းရင်းတွေကို အသိပညာပေး နိုးကြားစေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံအသီးသီးမှာ အဆိုပါနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ အနုပညာအစည်းအရုံးများက ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ လမ်းလျှောက်မှုတွေနဲ့ အခမ်းအနားများကို စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွေဟာ ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားမှုတွေကို အသိပေးမျှဝေခံစား နိုးကြားစေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကုလမသဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးလက်အောက်ခံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ တကယ်လို့ လက်ရှိအခြေအနေကိုသာ ထိန်းချုပ်ဖို့မကြိုးစားကြဘူးဆိုရင် လာမယ့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်လောက်မှာ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေဆုံးတဲ့အရေအတွက်ဟာ အတိုင်းအဆများစွာ တိုးပွားလာဖွယ်ရာ ရှိနေပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အတည်ပြုနိုင်ရင် ကုသဖို့ကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင် ကင်ဆာရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာ အတိအကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အခွင့်အလမ်း နည်းနေပါသေးတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာဟာ အများပြည်သူတွေ အလွယ်တကူ သတိမထားမိနိုင်တဲ့ အချက်တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါစဖြစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာ အလိုအလျောက် ပင်ပန်းခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ရုတ်တရက်ဆိုသလို လျော့နည်းသွားခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ အစာအိမ်ဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို မကောင်းခြင်းနဲ့ ချောင်းဆိုးခြင်း စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Inews-007/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်တဲ့ အီရန်ကို အမေရိကန်က တရားဝင် သတိပေး
4.2.17 Iran , United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ အီရန်ကို သတိပေးကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တရားဝင် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အီရန်ဟာ ဒေသငြိမ်းချမ်းရေး ထိခိုက်စေဖို့ ကြိုးစားတယ်လို့လည်း အမေရိကန်က စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။
ထရမ့်ရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မိုက်ကယ်ဖိလ်ယန်ဟာ အ်ိမ်ဖြူတော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ အီရန်ဟာ ဆသ်ယာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေဟာ အီရန်ကို သတိပြုစောင့်ကြည့်ရမဲ့အထဲ တရားဝင် ထည့်သွင်းသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
တီဟီရန်ကို ဦးတည်လိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့တရားဝင်သတိပေးချက်ပေါ်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေရှိစေမှာကြောင့် ယခုလို စောင့်ကြည့်ရမဲ့အထဲ ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုတာကို သူဟာ ရှင်းပြခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒုံးကျည်ပစ် လွှတ်လိုက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး အတည်ပြုချက်တွေကို စိန်ခေါ်လိုက်တာပဲလို့ သူက မှတ်ယူခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ ဒီစမ်းသပ်မှုနဲ့ ဆော်ဒီစစ်သင်္ဘောကို ဟူသီတွေ တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းဟာ ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးကို လှုပ်ရှားထိခိုက်စေဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ အီရန်ရဲ့လျှောက်လှမ်းချက်ကို နိုင်ငံတကာက ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် သိရအောင် ပြုလုပ်လိုက်တာပဲ။ ”
နောက်ဆုံးပစ်လိုက်တဲ့ အီရန်ဒုံးကျည်ဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ဆက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ကပစ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ဒုံးကျည်ဟာ မပေါက်ကွဲခင်အချိန်လေးမှာတင် မီတာ(၁၀၀၀)လောက်ထိ ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် စမ်းသပ်မှုကတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ အမေရိကန်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး ဖိုးကက်စ်နယူးဇ်မီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
တီဟီရန်ဘက်ကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ စွပ်စွဲမှုတွေကို ပယ်ချခဲ့ပြီး မိမိတို့လုပ်ရပ်ဟာ နူကလီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာ လက်ခံသဘောတူမှုတွေကို စော်ကားတာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒါဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကာကွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက် သက်သက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့က အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မုဟမ္မဒ်ဂျဝါဒ်ဇရီးဖ်ကတော့ အခုလို ပြောကြားသွားပါတယ်။
“ အီရန် အပါအဝင် အစ္စလာမ့်နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံက နိုင်ငံသားတွေဟာ အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ မရစေရဘူးဆိုတဲ့ ထရမ့်ရဲ့ဥပဒေ အသက်ဝင်လာပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံကြားက ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုကို အသစ်ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းရင်းတွေကို ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ မရှာကြံသင့်ပါဘူး။ ”
Inews-006/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » قناة الجزيرة
ကျဆုံးခဲ့သော ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီနှင့် ဦးနေဝင်းတို့အား ရည်စူး၍ ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား စတုဒီသာကျွေးမွေး
4.2.17 Myanmar , Video , ပြည်တွင်း , သတင်း
ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့ နံနက် (၁၁) နာရီမှ နေ့ (၂) နာရီအထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ (၄၂)လမ်းထိပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား စတုဒီသာအလှူတော်ကြီးတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လူမျိုး၊ ဘာသာစုံမှ ရာနှင့်ချီသော လူပေါင်းများစွာက အဆိုပါ စတုဒီသာ အလှူတော်သို့ လာရောက်၍ အားပေးသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ စတုဒီသာ ထမင်းကျွေး အလှူတော်အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းမှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကလည်း ပူးပေါင်းအားဖြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
နက်ဖန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ ရှဟီဒီ ဦးကိုနီရဲ့မိသားစုများက ဇေယာရသ် အာမ်းဒအ်ဝသ်အစီအစဉ် ပြုလုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mnews-004/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း
[info title="ကြည့်ရှုမှု အဆင်မပြေပါက" icon="exclamation-circle"] အလင်းမျက်ဝန်း You Tube Channel တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ » https://youtu.be/SXr1lC09b1A
မီးဘေးသင့် ဗလီမွမ်းမံရေးအတွက် လူမျိုး၊ ဘာသာစုံမှ အလှူငွေများ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်း
3.2.17 United States of America , သတင်း , နိုင်ငံတကာ
ဗလီပြန်လည်မွမ်းမံရေး အွန်လိုင်းအလှူခံမှ (၂) ရက်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ (၁၀) သိန်းကျော်ရရှိ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝိတိုရိယမြို့မှာ မီးဘေးသင့်မှုကြောင့် ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကို ပြန်လည်မွမ်းမံဖို့အတွက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အလှူငွေစုဆောင်းတဲ့ ကမ်ပိန်းတစ်ခုကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် သိပ်မကြာမီမှာပဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁) သန်းနဲ့အထက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂိုဖန်ဒ်မီ အမည်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ (၂) ရက်တာ ကာလအတွင်းမှာတင် လူမျိုး၊ ဘာသာစုံလင်တဲ့ လူဦးရေ (၁၉၀၀၀) ကျော်လောက်က အလှူငွေတွေကို အခုလို ဝိုင်းဝန်းထည့်ဝင် လှူဒါန်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစုဆောင်းရရှိထားတဲ့ အလှူငွေတွေကိုတော့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗလီတာဝန်ရှိသူတွေက ပြေကြားပါတယ်။
အခုလို ဗလီပြန်လည်တည်ဆောက်မွမ်းမံရေးအတွက် အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြသူတွေအပါအဝင် အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဗလီကြီး မီးလောင်စဉ်က ပူးပေါင်းအကာအကွယ်ပေးမှုအပေါ် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်း ဗလီဂေါပကအဖွဲ့က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ည (၂) နာရီ အချိန်လောက်က အဆိုပါဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဟာ အမေရိကန်လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် မီးသင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတာကြောင့် FBI နဲ့ တခြားသော အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနတွေကတော့ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) နာလောက်ကြာအောင် မီးလောင်ကျွမ်းပြီး ရှဟီးဒ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အဆိုပါဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကလည်း အမည်မသိလူတစ်ချို့ဟာ ဗလီကြီးရဲ့နံရံတွေပေါ်မှာ ညစ်ညမ်းစာသားတွေ၊ ဘာသာရေးစော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေကို ရေးသားခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
Inews-005/2/17 © အလင်းမျက်ဝန်း | ကိုးကား » GEO TV
► January 2017 (97)
မီးဘေးသင့် ဗလီမွမ်းမံရေးအတွက် လူမျိုး၊ ဘာသာစုံမှ အ...
ကျဆုံးခဲ့သော ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီနှင့် ဦးနေဝင်းတို...
ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်စမ်းသပ်တဲ့ အီရန်ကို အမေရိကန်က တရားဝ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကင်ဆာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အဖြစ် ကမ...
ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ထရမ့်ဥပဒေ ပျက်ပြယ်တေ...
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင် ဒုက္ခသည်ဦးရေ စုစုပေါင်း (၆၅)...
ကျဆုံးခဲ့သော ရှဟီဒီကြီး ဦးကိုနီ၏ ဇေယာရသ် အားမ်ဒအ်...
ပြည်မြို့ ရွှေကြာပင်ဗလီတွင် ရှဟီဒီဦးကိုနီအတွက် အီဆ...
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် လူမျိုးဘာသာစုံ လူထုချီတက်ပွဲဖြင့်...
ဂျော်ဒန် အစ္စလာမ့်နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်...
အွန်လိုင်း လုပ်ကြံသတင်းများ ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုက...
ကအ်ဗာအနီးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မှုဖြစ်ပ...
အက္ကစွာဗလီကြီးသို့ ဘုရားဖူးသွားလိုသော အစိုးရဝန်ထမ်း...
၂၀၁၆ တစ်နှစ်တည်းမှာပင် ဒူဘိုင်းသို့ လာရောက်လည်ပတ်သ...
ဗလီမီးရှိုသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသား နှစ် (၃၀) ထောင်ကျပြ...
မြုပ်နှံပြီး (၃၅) ရက်ကြာ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်တူး...
တက်ဆက်ပြည်နယ် ဗလီ မီးရှို့သူကို ဖမ်းဆီးရေး ဒေါ်လာ (၃...
အမေရိကန် ကဗျာစာဆိုတော်ပြိုင်ပွဲမှာ အစ္စလာမ်ကို ကာကွ...
ဆော်ဒီတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် ဂျင်မ်ကစားခန်းမများ ဖ...
အစ္စလာမ့်ဥပဒေဖြင့် အုပ်ချုပ်သော ဆော်ဒီနိုင်ငံအား တည...
ချစ်သူများနေ့ တရားဝင်ကျင်းပခွင့်မပြုကြောင်း ပါကစ္စတ...
ဆဲလ်ဖီးဝါသနာအိုး ဆယ်လီတွေဟာ ဦးနှောက်ရောဂါ ဖြစ်နို...
အကြမ်းဖက်ဝါဒကို အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အမ...
အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေး ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ အစ္စလာမ်ကို...
အူရ်ဒူစာပေရဲ့ဖခင်ကြီး မိရ်ဇာ အစဒွလ္လာဟ် ဂါလိဗ်ရဲ့ (...
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးရဲ့ (၁.၄) ထရီလီယံဖိုးလောက်ဟာ ဆေးလိပ်ြေ...
တန်ချိန်ထက်ဝက်နီးပါး အလေးချိန်ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အဝဆုံး မ...
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လောက် ကြာပြီးမှ ဂရိနိုင်ငံတွင်...
ပရိသတ်အာရုံကို လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ နယူးယောက်ဖက်ရှင်ရှို...
အွမ္မရဟ်နှင့် ကိုယ်တော့်ရောင်ဿွာတော်သို့ သွားရောက် ...
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပေမယ့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ရင...
ပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်နှင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များတွင် ...
ကမ္ဘာ့လက်နက်ပြန့်ပွားမှုရဲ့ (၅၆) ရာခိုင်းနှုန်းဟာ အမေ...
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ ကျူးဘားရဲ့မြို့တော်မှာ ပထမဆုံးသေ...
ဘိုးအင်း ၇၇၇ လေယာဉ်ပျံကို ပထမဦးဆုံးမောင်းနှံသူ အီ...
ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခေါင်းပေါ်ပုဝါခြုံမိလို့ ...
ကလေးငယ်များကို နွေရာသီအားကစားသင်တန်းများတွင် အခမဲ့...
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကို စိတ်ချမ်းသာမှု အပေးန...
အစ္စလာမ်အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးစွဲဖို့...